Bolivia anaty krizy sady misaratsaraka: loharano ety anaty aterineto natao hahatakarana tsara ilay fifandirana · Global Voices teny Malagasy
Mpanoratra Fabiola Gutiérrez Nandika (en) i Georgia Popplewell, Filip Noubel, Sylvia Aimée
Voadika ny 26 Novambra 2019 5:35 GMT
Vakio amin'ny teny English, Italiano, Ελληνικά, Français, Español
[Fanavaozana avy any amin'ny lahatsoratra teny espaniôla niaingàna: nametraka fialàna ilay filoha teo aloha Morales, lasa nialokaloka any Meksika, ary hatreo dia nisolo toerana azy ramatoa filoha mpisolo toerana, Jeanine Añez]
Taorian'ireo fifidianana izay ho filoham-pirenena natao tamin'ny 20 Oktobra 2019, niteraka zava-mampiahiahy be ireo fihetsiketsehana tao Bolivia, indrindra fa naka endrika fitokonana faobe sy fanakànana làlana izy ireny. Nitarika ihany koa fifandonana mahery setra teo amin'ireo mpomba ny antoko MAS (hetsika ho an'ny sosialisma) an'ny filoha amperinasa Evo Morales tetsy ankilany, ary tetsy andaniny, ireo olompirenena mikatsaka hiaro ny zony amin'ny fifidianana izay nihetsika ho amin'ny fanafoanana ireo fifidianana izay ho filoha noho ireo ahiahy mikasika hosoka.
Ny alin'ny 20 Oktobra, ny vokatra vonjimaika dia nanome tombony kely ho an'i Morales raha mitaha amin'ny mpifanandrina aminy Carlos Mesa avy amin'ny Vondrompiarahamonina Sivika, raha tampotampoka teo dia tapaka nandritra ny ora 20 ny fampitàna. Ny ampitso, rehefa niverina ny fandrakofana ireo fifidianana, nilaza tombony lavitra be azon'i Morales ireo vokatra, izay nofaritan‘ireo Fikambanan'ny Firenena ao Amerika ho toy ny ‘fiovàna tsy hay hohazavaina’.
Ny 24 Oktobra, nanambara ny fandreseny i Morales taorian'ny fanisàna ireo vatompifidianana izay nanome vokatra 46.83 isanjato ho an'i Morales raha 36.7 isanjato ny an'i Mesa. Io elanelan'isa zara raha misy 10 isanjato io dia afaka isorohana ny fizorana mankany amin'ny fihodinana faharoa. Nolavin'i Mesa ireny vokatra ireny ary mpikambana dimy avy ao amin'ny Kômity misahana ny fifidianana iraisan'ny rehetra (EPO) no nametraka fialàna ho mariky ny fanoherana, nanara-dia ireo efa ho telopolo mpiaramiasa amin-dry zareo nanao toy izany nialohan'ny nanaovana fifidianana. Avy eo nisy andiana manampahaizana momba ny kajimirindra, notarihan'ilay injeniera Edgar Villegas nanadihady ireo angondrakitra momba ny fifidianana azon'ny daholobe kiraina ao amin'ny OEB ary nanolotra ho an'ireo mpilaza vaovao ireo porofon'ny fisian'ny hosoka tamin'ny fifidianana.
Neken'ny governemantan'i Morales ny fitsirihana ny fifidianana notarihan'ny OÉA tamin'ny 31 Oktobra, saingy nolavin'i Mesa izay nitaky ny hanafoanana ny fifidianana. Nohararaotiny io mba hampahatsiahivana ny vahoaka, fa araka ny lalàm-panorenana boliviàna, dia voaràra ny famelàna an'i Morales hifaninana indray haka fepotoana fitondrana fanintelony, izay efa nohamafisin'ny fitsapankevibahoaka iray nokarakaraina tamin'ny Febroary 2016 tamin'ny alàlan'ny fitsipahana nataon'ny olompirenena.
LaPublicaBO — media tsy miankina, isankariva ny La Pública dia mikarakara fihaonana ao amin'ny Google Hangouts ary manome fitenenana irao vahiny asainy izay mizara ny fomba fijerin-dry zareo ny fifandirana misy amin'izao fotoana izao
MuyWaso — ity vondrona feminista ity dia mizara torohay sy fanambaràna maro .
Guardiana Bolivia — Media manana ny foibeny ao Cochabamba, mifantoka amin'ny zon'olombelona
InfoTarija — Media manana ny foibeny ao Tarija mitatitra ny avy ao amin'ny faritra atsimon'i Bolivia
Chris Eguez — olona ‘trans’, sady mpikatroka feminista, manadihady ny anjara toeran'ireo vehivavy sy ny toeran'ny fahasamihafàna sôsialy amin'ny fomba fijery ara-tantara.
María Galindo — vehivavy amerikàna tatsimo malaza, feminista manana fiaviana boliviàna. Ny hetsika ataony dia manintona ireo feminista marobe sy ireo tsy mahatsiaro ho voasolo tenan'ireo mpanao an-tendro avy amin'ny ankolafy roa ao Santa Cruz sy Cochabamba. Manana ny fandaharany manokana ihany koa izy ao amin'ny fampielezampeo, no sady mandefa ao amin'ny Facebook, nomeny anarana hoe. “Aza Vonoina Noho ny Resaka Seza izahay.”
Santiago Espinoza — mpanao gazety ara-kolontsaina ary toniandahatsoratra ao amin'ny gazetiboky mpivoaka isaky ny Alahady La Ramona.
Chequea Bolivia sy Bolivia Verifica dia sehatra roa fanamarinam-baovao natomboka talohan'ny fifidianana, ary ankehitriny dia miasa manamarina ireo hafatra, sary, ary tsaho miely zaraina ety anaty tambajotra sôsialy sy ireo fampiharana fandefasana hafatra.
#DisoIzany Misy lalàna iray milaza fa ny tolotra aterineto dia natao fotsiny ho an'ireo andrim-panjakana #ChequeaBolivia https://t.co/PaDqFTfAhG
Los Tiempos — ity gazetin'i Cochabamba ity dia manome antontan-kevitra nalaina nandritra ireo savorovoro sy mizara izany any anatin'ireo kaontin'ny tambajotra sôsialiny ireo lahatsary afaka jerena amin'ny finday:
El Deber — ilay gazety lehibe indrindra mandrakotra ny tanànan'i Santa Cruz, saingy mamoaka koa ireo vaovao manerana ny firenena sy ao amin'ny faritra.
Tuffí Aré — lehiben'ireo mpanao gazety fahiny tao amin'ny El Deber, loharano azo itokiana tokoa izy ho an'ireo vaovao avoakany ao amin'ireo tambajotra sôsialiny.
Mónica Salvatierra — lehiben'ireo mpanao gazety ao amin'ny El Deber amin'izao fotoana izao.
Nandika (fr) i Filip Noubel